Akhbaarta Wanaagsan, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Injiilka - Warka wanaagsan!
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrad sax ah iyo khalad, qof walbana wuxuu horay u sameeyay wax khalad ah - xitaa iyadoo loo eegayo fikradooda. Hadal caan ah ayaa yidhi: Qof kastaa weligii wuu ka xumaaday saaxiib, ballan buu jabay, wuxuu dhaawacay dareenka qof kale. Qof kastaa wuu garanayaa dambiga.
Sidaa darteed dadku ma rabaan inay wax ku yeeshaan Ilaah. Iyagu ma doonayaan maalinta xukunka maxaa yeelay waxay og yihiin inaysan Ilaah hortiisa istaagi karin iyagoo leh qalbi saafi ah. Waxay yaqaaniin inay isaga addeecaan, laakiin waxay kaloo ogyihiin inayna addeecin. Waxaad dareemaysaa xishood oo waxaad dareemaysaa dambi.
Sidee deyntooda dib loogu soo furan karaa? Sidee maskaxda loo nadiifiyaa? "Dambi dhaafku waa rabbaani," ayuu ku soo gabagabeeyey ereyga muhiimka ah. Ilaah laftiisa waa la cafiyey.
Dad badan baa og oraahdan, laakiin ma rumeystaan ​​in Eebbe uu ku filan yahay inuu caawiyo S ü in la siiyo. Waxaad wali dareemaysaa dambi. Waxay wali ka baqayaan muuqaalka Ilaah iyo maalinta xukunka.
Laakiin Ilaah hortiisuu u muuqday - shakhsiyan ciise masiix. Uma uusan iman inuu xukumo, laakiin inuu badbaadiyo. Wuxuu keenay farriin cafis ah wuxuuna ku dhintay iskutallaabta si loo dammaanad qaado in la cafiyo.
Farriinta Ciise, farriinta iskutallaabtu, waxay war wanaagsan u tahay dhammaan kuwa dembiilayaasha ah. Ciisena, nin rabaani ah, ayaa aqbalay ciqaabteenna. Cafis waa la siiyaa dhammaan kuwa is-hoosaysiiya oo ku filan inay rumaystaan ​​injiilka Ciise Masiix.
Waxaan u baahanahay warkan wanaagsan. Injiilka Masiixu wuxuu keenaa nabada maskaxda, farxad iyo guul shaqsiyeed. Injiilka runta ah, warka wanaagsan, waa injiilka Masiixa ku wacdiyey. Isla injiilkii waxaa dirtay rasuulladii: Ciise Masiix, iskutallaabta lagu qodbay (1 Korintos 2,2), Ciise Masiix xagga Masiixiyiinta, rajada ammaanta (Kolosay 1,27), sarakicidda kuwii dhintay, farriinta rajada iyo badbaadada aadanaha waa injiilka boqortooyada Ilaah.
Ilaahay kaniisadiisa wuxuu faray inay wacdiyaan ü iyo Ruuxa Quduuska ah si uu u dhammaystiro hawshan. Waraaq uu u diray Korintos Paul wuxuu ku sifeynayaa injiilkii uu Ciise kaniisadiisa u siiyay: «Laakiin aniga waan ku iri, Br ü kii injiilka ku wacdiyey aan idinku wacdiyey, waadna aqbasheen, kaas oo aad ku taagan tihiin, oo aad idinku badbaadi doontaan, haddii aad ku duubtaan hadalka aan idinku wacdiyey, mooyaane waxay u rumeeyeen si aan micne lahayn. Waayo, markii hore waxaan idiin dhiibay oo dhan waxa kale oo aan ka helay, waxa weeye, Masiixu our S ü dhintay sida Qorniinku leeyahay; iyo in la aasay isaga oo maalintii saddexaad lagu sara kiciyey Qorniinka. Markaasuu Keeyfas u muuqday, markii dambena laba iyo tobankii. Kadib wuxuu u muuqday wax ka badan f ü shan boqol oo Br ü hal waqti, kuwaas oo intooda badani ilaa iyo hadda, laakiin qaarkood ayaa sidoo kale hurdeen. Kolkaasuu Yacquub u muuqday, ka dibna rasuulladii. Ugu dambayntii, kulli, sidii markii hore oo kale, ayuu weliba aniga ii muuqday ” (1 Korintos 15,1: 8 Eberfeld Bible).
Bawlos “kan wax walba ka sarreeya” wuxuu ku nuuxnuuxsaday in sida ku qoran Qorniinka Quduuska ah in Ciise yahay Masiixa ama Masiixa uu isagu u yahay kan S ü dhintay, waa la aasay oo haddana la sara kacay. Wuxuu kaloo ku nuuxnuuxsaday inay dad badani ka marag kacayaan sarakicidda Masiixa haddii qof uun shaki galo.
Bawlos wuxuu cadeeyay inay tahay injiilka "kaas oo aad idinku ku badbaadi doontaan". Himiladeenu waa inay ahaataa sida Bawlos u gudbiyo wixii aan helnay iyo wixii "ka sarreeya" kale.
Wixii aan helnay oo ay tahay inaan u gudubno waxay la mid yihiin wixii Bawlos iyo rasuulladii kale ka heleen - oo hor taagan wax kasta oo kale - "in Masiixu u yahay S ü dhintay sida Qorniinku leeyahay; iyo in la aasay iyo in maalintii saddexaad la sara kiciyey Qorniinka ... ".
Dhammaan waxbarisyada kale ee Kitaabka Quduuska ah waxay ku saleysan yihiin runtaan aasaasiga ah. Kaliya Wiilka Ilaah ayaa caawin kara S ü oo u dhinta uun inuu sidaas yeelay oo kuwii dhintay ka soo sara kacay, waxaynu sugi karnaa soo laabashadiisa iyo dhaxalkayaga, nolosha weligeed ah, kalsooni aan xasilloonayn.
Sidaa darteed Yooxanaa wuxuu qori karaa: "Haddii aan aqbalno maragfurka dadka, maragfurka Ilaah waa weyn yahay, maxaa yeelay, waa marag Ilaah ka marag furay wiilkiisa. Ku alla kii rumaysta wiilka Ilaah wuxuu ku leeyahay maraggiisa. Ilaah ma rumeeysto, isaga ayaa ka dhigaya L ü beenaale, maxaa yeelay, isagu ma rumaysteen maraggii uu Ilaah ka soo qaatay wiilkiisa.
«Maragguna waa kan Ilaah ina siiyey nolosha weligeed ah, oo ay noloshanu Wiilkiisa ku jirto. Kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay, Kii aan Wiilka Ilaah haysanna nolosha ma leh. (1 Yooxanaa 5,9: 12).
Injiilka waxaa wacdiyey Ciise
Qaar, waxay umuuqataa, ü kululaynta waxsii sheegyada Baybalka, laakiin ay kugu adagtahay f ü r in la dhiirrigeliyo farriinta dhexe ee Kitaabka Quduuska ah - badbaadada xagga Ciise Masiix! Ilaahay Masiixiyiinta wuxuu siiyay hadiyadda ugu qaalisan oo dhan wuxuuna siiyay waajibka ah inay dadka kale iibiyaan ü sida ay ku heli karaan hadiyaddan!
Markuu Butros u sharaxey shaqada rasuullada Kabtan Kornelius, wuxuu yiri: “Isaguna [Ciise] wuxuu ina faray inaan dadka u wacdinno oo aan u markhaati furno inuu Eebbe u xilsaaray inuu noqdo garsooraha kuwa nool iyo kuwa dhintayba. Nabiyada oo magiciisa ku rumoobay dhammaan magiciisa, cafiska Eebbe ü waa inuu helaa " (Falimaha Rasuullada 10,42: 43).
Tani waa farriinta ugu weyn; Warka wanaagsan ee loo muujiyey rasuullada wuxuu ahaa fariinta udub dhexaadka nebiyada oo dhan - in Eebbe xukumay Ciise Masiix ü ku saabsan kuwa nool iyo kuwa dhintay iyo qof kasta oo isaga rumeeya S ü cafis magaciisa!
Luukos wuxuu qoray in Ciise uu leeyahay J ü wax yar ka hor intuusan cirka u bixin, badhtanka G ü Farriinta farriintiisa waxay xusuusineysaa: "Markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan Qorniinka, oo wuxuu ku yidhi: Waa qoran tahay in Masiixu silcin doono oo uu maalinta saddexaad ka soo sara kici doono, oo in magiciisa lagu soo dejiyo. [Ka qoomamey] cafiska S ü dadyowga oo dhan. Ka bilow Yeruusaalem oo halkaas joog ü Markhaati " (Luk. 24,45-48).
Maxay rasuulladu fahmi karaan waxa ku qoran Qorniinka markuu Ciise macno samaynayay? ü r furay? Si kale haddii loo dhigo, sida uu sheegayo Ciise, waa maxay runta iyo waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in laga fahmo Qorniinka Axdiga Hore?
In Masiixu silciyo oo uu ka soo sara kici doono kuwii dhintay maalinta saddexaad iyo dambidhaafka [cafiska] dembidhaafka Eebbe ü Oo dadka oo dhan magiciisa lagu wacdiyey.
"Mid kale badbaadada ma jiro, oo ma jiro magac kale samada hoosteeda ah oo dadka loo bixiyey oo aynu ku badbaadi doonno", Butros wuxuu ku wacdiyey (Falimaha Rasuullada 4,12).
Laakiin waa maxay injiilka boqortooyada Ilaah? Ciisena miyaanu ku wacdiyin injiilka boqortooyadii Ilaah? Nat ü dhab ah!
Injiilka boqortooyada Ilaah wuu ka duwan yahay kan Bawlos, Butros iyo Yooxanaa ü wacdinta ku saabsan badbaadada ee Ciise Masiix? at dhan ma!
Aynu cadaynno in gelitaanka boqortooyada Ilaah tahay madax furasho. Si aad u badbaaddo iyo inaad u timaado boqortooyada Ilaah waa isku mid! Helitaanka nolosha weligeed ah waxay la mid tahay la kulanka badbaadada [ama badbaadada] maxaa yeelay badbaadada waxay la mid tahay badbaadada laga helo dhimashada S ü gacmaha.
Waxaa jira nolol Ciise - nolosha weligeed ah. Nolosha daa'imka ahi waxay u baahan tahay cafiska S ü gacmaha. Iyo cafiska S ü Mid ayaa helaya, ama caddeyn, kaliya isagoo rumeysan Ciise Masiix.
Ciise waa xaakin iyo badbaadiye labadaba. Isaguna waa boqorka boqortooyada. Injiilka boqortooyada Ilaah waa injiilka badbaadada ee Ciise Masiix. Ciise iyo rasuulladiisii ​​waxay ku wacdiyeen isla fariin - Ciise Masiix waa Wiilka Ilaah iyo sida kaliya ee lagu heli karo badbaadada, badbaadada, nolosha weligeed ah iyo gelitaanka boqortooyada Ilaah.
Iyo marka dareenku u furan yahay inay fahmaan waxsii Axdiga Hore, sida Ciise u fahmay rasuulladii (Luk 24,45), way cadaatay in farriinta udub dhexaadka ee nebiyadu sidoo kale ahayd Ciise Masiix (Falimaha Rasuullada 10,43).
Aynu hore u sii soconno. Yooxanaa wuxuu qoray: "Ku alla kii rumaysta wiilka wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah. Ku alla kii aan adeecin wiilka, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa sii jiri doonta. ü korkiisa " (Yooxanaa 3,36). Taasi waa luuqad cad!
Ciise wuxuu yidhi: "... Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha; ninna Aabbaha uma yimaado laakiin xaggayga ku yaal" (Yooxanaa 14,6). Waxa aan runtii u baahan nahay in la fahmo oo ku saabsan ereyga Eebbe ü waa in qofka Ciise Masiix la'aantiis uusan imaan karin aabaha ama uusan garan karin Ilaah, uusan dhaxli karin nolosha weligeed ah ama uusan geli karin boqortooyada Ilaah.
Waraaq uu u diray Kolosay, wuxuu ku qoray: "Waad ku mahadsan tihiin Aabaha t ü Wuxuu dhaxal u siiyey quduusiinta nuurka. Wuxuu inaga badbaadiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inagu riday dhabta ah wiilkiisa qaaliga ah, kaas oo aan ku badbaadno, taas oo ah cafiska S ü dhammaado " (Kolosay 1,12-14).
U fiirso sida dhaxalka quduusiintu u leeyihiin, boqortooyada iftiinka, boqortooyada wiilka, madax furashada iyo cafiska S ü si ay u sameeyaan khamiir aan qurux lahayn oo Ereyga runta ah, injiilka.
Aayadda 4aad, Bawlos wuxuu ka hadlayaa “iimaanka [Kolosaydii] ee Ciise Masiix iyo jacaylka aad u haysaan quduusiinta oo dhan”. Wuxuu qoray in aaminaadaas iyo jacaylkaas uu ka soo baxo "rajo ... in f ü r ayaa kuu diyaar ah jannada. Horey ayaad uga maqashay iyada oo ku jirta ereyga runta ah, kaas oo ah injiilka kuu yimid ... " (Aayadaha 5-6). Mar labaad, injiilku wuxuu udub dhexaadka u yahay rajada badbaadada weligeed ah ee boqortooyada Ilaah, rumaysadka xagga Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah, oo innagana lagu soo furtay.
Aayadaha 21 illaa 23 Bawlos wuxuu ku sii daray, “Adiguna, kan waagii hore qariib ahaa oo cadow ku ahaa shuqullada sharka leh, wuxuu haatan la heshiiyey dhimashadii dhimashadiisa, inuu isagu hortiisa idinka dhigo mid quduus ah oo eedla'aan iyo eedla'aan; kaliya waxaad kujirtaa iimaanka, gr ü raadso oo adkayso, oo ha ka tegina rajadii injiilkii aad maqashay oo lagu u naadiyey dhammaan waxa samada ka hooseeya oo dhan. Waxaan noqday midiidinkiisa, Bawlos. "
Aayadaha 25 illaa 29, Bawlos wuxuu sii waday inuu sharaxaad ka bixiyo injiilka uu u adeegayay iyo hadafkiisa wacdinta ü shishaysa. Wuxuu qoray: “Waxaan noqday addoonkaaga xafiiska Ilaah i siiyey inaan ereygiisa si weyn kuugu wacdiyo, taas oo ah sirta qarsoonayd tan iyo qarniyo badan, laakiin hadda waa la muujiyey. Quduusiintiisa, kuwuu Ilaah doonayay inuu ogeysiiyo waxa hodanka ah ee ammaanta leh ee qarsoodigan ku dhex leeyahay dadka aan Yuhuudda ahayn, oo ah Masiixa idinku dhex jira, oo ah rajada ammaanta ü Waxaan soo afjaraynaa oo waan waaniyey dadka oo dhan oo waxaan ku barin dadka oo dhan xigmad oo dhan si aan qof walba ugaamil uga dhigno Masiixa. Daf ü fuliyaan shirkad ü Waan kaxaystay oo waan la diririyey xoogga kan xoogga igu shaqeeya.
Waxa injiilku ku saabsan yahay
Injiilka oo dhamina wuxuu ku saabsan yahay Ciise Masiix. Waxay la xiriirtaa aqoonsigiisa iyo shaqadiisa uu u yahay Wiilka Ilaah (Yooxanaa 3,18), sidii garsooraha kuwa nool iyo kuwa dhintayba (2 Timoteyos 4,1) sidii Masiixa (Falimaha Rasuullada 17,3), Badbaadiye ahaan (2 Timoteyos 1, 10), sidii wadaad sare (Cibraaniyada 4,14) marka F ü hadalka (1 Yooxanaa 2,1), sida Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada (Muujintii 17, 14), oo curad u ahaa Br badan ü ugu dambeeya (Rooma 8,29), saaxiib ahaan (Yooxanaa 15,14: 15).
Waxay ku saabsan tahay isaga sidii adhijirka nafteenna (1. Petr. 2,25), sidii Wankii Ilaah, ee S ü adduunka ayey ka qaadataa (Joh. 1,29), sida f ü Wan yar ayaa qalay (1 Korintos 5,7), sida u ekaanta Ilaaha aan la arki karin iyo sidii curadka oo dhan abuur kasta ka hor (Kolosay 1,15), oo ah madaxa bulshada iyo bilowga iyo curadka kuwii dhintay (Aayadda 18), oo ka tarjumaysa ammaanta Ilaah iyo sumcadda dabeecaddiisa (Cibraaniyada 1,3), sida tarjumaha aabaha (Matayos 11,27), sida dariiqa, runta iyo nolosha (Joh 14,6), sida T ü r (Yooxanaa 10,7).
Injiilku wuxuu ku saabsan yahay Masiixa bilowga iyo dhammaystirka iimaankeenna (Cibraaniyada 12,2), taliye ahaan ü ku saabsan abuurista Eebbe (Muujintii 3,14), sidii kan hore iyo kan ugu dambeeya, bilowga iyo dhammaadka (Muujintii 22,13), sidii goosoos ubax (Jer 23,5), sida dhagaxa geeska (1 Butros 2,6), sida xoogga Ilaah iyo xigmadda Eebbe (1 Korintos 1,24), sidii qof weyn ü damacyada quruumaha oo dhan (Xag. 2,7).
Waxay ku saabsan tahay Masiixa, markhaatiga aaminka ah oo run ah (Muujintii 3,14), kii dhaxalka lahaa wax kasta (Cibraaniyada 1,2), geeska badbaadada (Luk. 1,69), Iftiinka adduunka (Yooxanaa 8,12), rootida nool (Joh 6,51), xididka Yesse (Ishacyaah 11,10), badbaadadeenna (Luukos 2,30), cadceedda xaqnimada (Mal. 3,20), Ereyga nolosha (1 Yooxanaa 1: 1), Wiilka Ilaah wuxuu xoog ku yeeshay sarakiciddiisa kuwii dhintay (Rooma 1,4) - iyo wixii la mid ah.
Bawlos wuxuu qoray, "Ma jiro nin aasaas aasaas u dhigi kara waxaan ahayn Ciise Masiix mooyaane" (1 Korintos 3,11). Ciise Masiix waa linchpin, dulucda udub dhexaadka, aasaaska injiilka. Sideen wax ku wacdi karnaa waxkastoo aan Kitaabka Quduuska ah khilaafsanayn?
Ciise wuxuu ku yidhi F ü maqal Yuhuudda, "Qorniinka ayaad baadhaan, maxaa yeelay waxaad u malayn inaad nolosha weligeed ah ku dhex jirtaan, waana iyaga kuwa ii marag furayaa, laakiin dooni maysaan inaad ii timaadid inaad nolosha lahaato" (Yooxanaa 5,39: 40).
Farriinta in la iibiyo Masiixiyiinta ü waxaa loogu yeedhaa badbaadada, taas oo ah nolosha weligeed ah ee boqortooyada Ilaah. Badbaadada weligeed ah ama boqortooyada Ilaah waxaa lagu gaari karaa oo keliya midka dhabta ah ee T ü r, jidka keliya ee runta ah - Ciise Masiix. Waa boqorka boqortooyadaas.
Yooxanaa wuxuu qoray: "Kan wiilka diida ma leh Aabbaha; ku alla kii wiilka qirtaa isagana Aabbaha" (1 Yooxanaa 2,23). Rasuul Bawlos wuxuu u qoray Timoteyos: "Maxaa yeelay, waxaa jira Ilaah iyo dhex-dhexaadiye u dhexeeya Ilaah iyo dadka, oo ah ninka Ciise Masiix, kan naftiisa u bixiyey f ü dhammaan si loo soo furto in tan lagu wacdiyo waqtigiisa " (1 Timoteyos 2: 5-6).
Cibraaniyada 2,3 waxaa nalooga digay: "... sidee baan uga baxsan karnaa haddii aanaan u fiirsan badbaadada weyn ee caynkaas ah oo ka bilaabatay wacdinta Rabbiga oo ay nagu xaqiijisay kuwa maqlayay?" Farriinta badbaadada ayaa waxaa markii hore iibiyay Ciise qudhiisa ü Waxay ahayd farriinta Ciise u gaarka ah xagga Aabbaha.
Yooxanaa wuxuu qoray waxa Ilaah qudhiisu iska leeyahay ü Waxaa ka marag furay wiilkiisa: "Oo kanu waa maraggii uu Ilaah ina siiyey nolosha weligeed ah, oo ay noloshanu Wiilkiisa ku jirto. Ku alla kii wiilka haystaa noloshuu leeyahay, ku alla kii aan wiilkii Ilaah lahayn nolosha baa leh. maahan ” (1 Yooxanaa 5,11: 12).
Yooxanaa 5,22: 23 Yooxanaa mar kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday culeyska wiilka la siin doono: "Waayo, Aabbuhu ninna ma xukumo, laakiin wuxuu leeyahay xukunka oo dhan wiilka. ü dhiibtay si ay u wada maamuusaan wiilka sida ay u maamuusaan aabaha. Kii aan wiilka murweeyn, ma murweeyo aabihii soo diray. Sidaas darteed ayaa Kaniisaddu u wacdiyi jirtay si joogto ah ü ku saabsan Ciise Masiix! Ishacyaah wuxuu sii sheegay: "Sababtaas daraaddeed ayuu Ilaah dib u yidhi, Bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigayaa dhagax dhagax ah oo la hubo, oo dhagax weyn oo qaali ah oo aasaas leh. Ku alla kii rumaysta ceebaysan maayo. (Ishacyaah 28:16 EG).
Maaddaama aan ku soconno nolosha cusub ee loogu yeedhay Ciise Masiix oo aan isaga ugu aaminno sidii dhulkeenna hubaal ah iyo rajada soo laabashadiisa sharaf iyo xoog maalin walba, waxaan rajeyneynaa dhaxalkeenna weligeed ah rajo iyo kalsooni.
Wicitaan mustaqbal halkan iyo hadda
Laakiin markii Yooxanaa la qabtay kadib, Ciise wuxuu yimid Galili wuxuuna dadka ku wacdiyey injiilka Ilaah oo ku yidhi: Wakhtigu waa hubaal ü llt, iyo boqortooyadii Ilaah way timid. Toobad keena oo injiilka rumaysta! (Markos 1: 14-15).
Wacdigan uu Ciise keenay waa "war wanaagsan" - farriin awood badan oo beddeleysa noloshana beddeleysa. Injiil ü Berf ü Kaliya ma aha dhagaysi iyo beddelaad, laakiin ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa kan ugu fiican qof walba ü samee dhakhtar isaga diidan ü badbaado.
Injiilku waa "xoogga Ilaah oo barakeeyo kuwa rumaysta oo dhan" (Rooma 1:16). Injiilku waa casuumada uu Ilaah noogu yeeray si aan ugu noolaano heer gabi ahaanba ka duwan ü horseedi. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ay jirto dhaxal ina sugaya oo si buuxda noo lahaan doona marka Masiixu soo noqdo. Waxa kale oo ay martiqaad u tahay xaqiiq ruuxi ah oo xoog leh oo durba annaga iska leh.
Bawlos wuxuu injiilka ugu yeedhay "Injiilka Masiixa" (1 Korintos 9:12), "Injiilka Ilaah" (Rooma 15:16) iyo "Injiilka Nabadda" (Efesos 6: 15). Laga bilaabo Ciise, wuxuu bilaabayaa j ü dib u fur fur fikradda boqortooyada Ilaah, adoo diiradda saaraya macnaha guud ee imaatinka koowaad ee Masiixa.
Ciise, the ü Isaga oo ku wareegaya jidadka boodhka leh ee Yahuudiya iyo Galili, Bawlos wuxuu barayaa, inuu hadda yahay Masiixa la sara kiciyey, oo fadhiista midigta Ilaah oo isna ah "madaxa xoogga iyo xoogga oo dhan" (Kolosay 2:10).
Sida ku xusan Bawlos, dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix waxay ku yimaadaan "ugu horrayn" injiilka; iyagu waa Schl ü dhacdooyinka waaweyn ee qorshaha Eebbe (1 Korintos 15: 1-11). Injiilku waa warka wanaagsan f ü r masaakiinta iyo dulmiga ü ckten. Taariikhda ayaa leh yool. Ugudambeyn, sharcigu wuu guuleysan doonaa, maahan xoog.
Gacanta ayaa ka dhacday ü guul ka gaadhay gacanta gacanta. Boqortooyada sharku waxay siisaa boqortooyadii Ciise Masiix, amarro waxyaalaha Masiixiyiintu mar horeba la kulmayeen qayb ahaan.
Bawlos wuxuu ku nuuxnuuxsaday qaybtan injiilka ka dhanka ah ü ku saabsan Kolosay: "Farxad ayaa mahad leh Aabbaha t ü Wuxuu dhaxal u siiyey quduusiinta nuurka. Wuxuu inaga badbaadiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inagu riday dhabta ah wiilkiisa qaaliga ah, kaas oo aan ku badbaadno, taas oo ah cafiska S ü dhammaado " (Kolosay 1,12-14).
F ü Masiixiyiinta oo dhan, injiilku waa mid jira oo run ah mustaqbalna leh ü mustaqbal rajo. Masiixa sara kiciyay, oo ah Sayid ü Waqtiga ku saabsan, booska iyo wax kasta oo ka dhaca halkaan waa horyaalnimada f ü r Nasaarada. Kan jannada loo korsaday waa isha awoodaha jirta (Efesos 3,20: 21).
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ciise masiix carqalad kasta ku haysto noloshiisa dunidan ü ayaa ka adkaaday. Jidka iskutallaabtu waa hab adag laakiin guul u leh boqortooyada Ilaah. Taasi waa sababta uu Bawlos u soo koobi karo injiilka si isdaba joog ah, "Waxaan u malaynayay inay f ahayd ü r xaq u leedahay in aan waxba idinka dhex ogaan laakiin Ciise Masiix oo keliya, iskutallaabta lagu qodbay " (1 Korintos 2,2).
Dib udhaca weyn
Markuu Ciise ka muuqday Galili oo uu si adag injiilka ugu wacdiyey, wuxuu filayey jawaab. Isaguba isagaa jawaab naga sugaya maanta.
Laakiin martiqaadkii Ciise ee ahaa inuu galo boqortooyada looma haynin meel bannaan. Wicitaankii Ciise f ü Boqortooyada Ilaah waxaa weheliyey calaamado yaab leh iyo yaabab badan oo ka dhigay waddan dhib ku haystay xukunkii Rooma-ga fadhiisatay oo fiiro gaar ah leh.
Tani waa hal sabab oo Ciise ugu qasbay inuu cadeeyo waxa uu ula jeedo Boqortooyada Ilaah. Yuhuuddu wakhtigii Ciise waxay sugayeen F ü Hoggaamiye dib u soo celin kara ammaanta Daa'uud iyo Sulaymaan ummaddooda ü talin lahaa. Laakiin farriinta Ciise waxay ahayd "laba kacaan", sida uu qorey cilmiga Oxford NT Wright. Marka hore, wuxuu qaatay filashooyinka guud ee ah in a j ü dian super-state tuur harqoodkii Roomaanka w ü rde, oo u rogay wax gabi ahaanba ka duwan. Wuxuu ka dhigay rajada baahsan ee xoreynta siyaasadeed fariin badbaadada ruuxiga ah: injiilka!
"Boqortooyada Ilaah waa timid, wuxuu umuuqday inuu dhaho, laakiin maahan waxaad u maleysay inay taasi tahay" (NT Wright, Yuu ahaa Ciise?, Bogga 98).
Ciise dadka wuu la yaabay natiijada ka soo baxday warkiisa wanaagsan. "Laakiin qaar badan oo ah kuwa ugu horreeya ayaa noqon doona kuwa ugu dambeeya kuwa ugu dambeeyase waa kuwa ugu horreeya" (Matayos 19,30).
"Waxaa jiri doona ilko jirriqsi iyo ilko dilma," ayuu ku yidhi j ü dadkii ka soo horjeeday, "hadaad arki doontaan Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub iyo nebiyada oo dhan oo boqortooyadii Ilaah ku jira, laakiin waan idin riixayaa" (Luukos 13:28).
Cashada weyn ee f ü r qofkasta oo jooga (Luk. 14,16-24). Dadka aan Yuhuudda ahayn ayaa sidoo kale lagu casuumay Boqortooyada Ilaah. Marka labaadna ma ahaa kacaan kayar.
Nebi Naasared wuxuu u muuqday marar badan f ü r inaad lahaato sharcilaawaha - laga bilaabo baraska iyo Kr ü in la siiyo canshuur bixiyeyaasha hunguri-weynaha ah iyo mararka qaar xitaa f ü r dulmiga Roman necbahay ü doolshe
Warka wanaagsan ee Ciise keenay wuxuu ka hor imaanayaa wax kasta oo laga filayo, xitaa kuwa aaminka ah ee J. ü dheer (Luk. 9,51-56). Mar labaad iyo mar labaad Ciise wuxuu sheegay in boqortooyadii ay filayeen mustaqbalka ay durbadiiba si firfircoon uga dhex muuqan jireen shaqadiisa. Dhacdooyin naxdin leh ka dib, wuxuu yiri: "Laakiin haddaan jinniyada ku saaro farta Ilaah, markaas boqortooyada Ilaah waa kuu timid" (Luukos 11,20). Si kale haddii loo dhigo, dadkii arkay shaqadii Ciise waxay arkeen mustaqbalka xaadirka. Ciise wuxuu u rogay filashooyinka caanka ah ugu yaraan saddex siyaabood:
Ciise wuxuu baray warka wanaagsan ee ah in Boqortooyada Ilaah ay tahay hadiyad saafi ah - ciisiimada Eebbe oo mar hore daawo u keentay. Tani waa sida Ciise u bilaabay "sanadka nimcada Rabbiga" (Luk. 4,19; Ishac. 61,1-2). Laakiin "M" ayaa "la aqbalay" Reich ü sharaf leh iyo culays, masaakiinta iyo tuugannada, carruurta jilicsan iyo cashuurqaadayaasha toobad keena, dhillooyinka kuwa toobad keena iyo kuwa dibedda ka ah bulshada. F ü r Adhiyo madow iyo ido ruuxi lumay, wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay xoolo dhaqato.
Warka wanaagsan ee Ciise ayaa sidoo kale ahaa f ü loogu talagalay dadka diyaar u ahaa inay Ilaah u soo jeestaan ​​xagga daahirinta xanuunka badan ee toobadda toosan. Kuwaas oo si daacad ah u toobad keenay S ü beddelaad w ü weyn ee Eebbe ü Raadi aabbe baadi goob ugu jira wiilashiisii ​​iyo gabdhihii warwareega oo arko markay yihiin "Weli fogaan" (Luukos 15,20) Warka wanaagsan ee injiilku wuxuu ka dhigan yahay in qof kasta oo qalbiga ka dhaha: “Ilaahow, S ü naxariis leh " (Luk 18,13) tmd daacad ah waxaa loola jeedaa ku biiritaanka Ilaah ü Helitaanka maqalka w ü rde. Weyddiista, waa laydin siin doonaa; doona oo waad heli doontaan; garaaca, waa laguu furi doonaa. (Luukos 11,9). F ü Kuwa rumeeyey ee ka leexday dariiqyada adduunka, tani waxay ahayd warka ugu wanaagsan ee ay maqli karaan.
Injiilka Ciise wuxuu sidoo kale macnaheedu ahaa inaysan jirin wax joojin kara guushii boqortooyadii ee uu Ciise keenay - xitaa haddii ay umuuqato mid kasoo horjeedda. Dareenkaani w ü la kulmi lahaa qadhaadh, iska caabin aan naxariis lahayn, laakiin ugu dambeyntii w ü ku dhex geli lahaa ü Bernat ü hanashada xoogga jirka iyo ammaanta. Masiixu wuxuu yidhi J ü ngern: "Laakiin goortuu Wiilka Aadanahu ammaantiisa ku yimaado, isaga iyo malaa'igaha oo dhan isaga, wuxuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhammuna hortiisay ku soo wada ururi doonaan. ka soociyaa riyaha " (Mat. 25,31-32).
Markaa warka wanaagsan ee Ciise wuxuu lahaa xiisad firfircoon oo dhex martay "hore" iyo "weli ma". Injiilka boqortooyada waxaa lagu tilmaamaa boqortooyadii Ilaah, oo horey u jirtay - "Eeg kuwa indha la 'oo socodka curyaanka ah, baraska qaba daahir oo maqla dhagoolaha, kuwii dhintayna istaagaan, injiilkaana waa lagu wacdiyaa dadka masaakiinta ah" (Matayos 11,5). Laakiin boqortooyadii "wali ma aysan jirin" halkaas oo dareen ahaan ay ka buuxaan ü soo socota. Fahmitaanka injiilka macnihiisu waa fahanka labadan waji: dhinac marka la eego, joogitaanka ballanqaad ee boqorka, oo durba ku nool dadkiisa, iyo dhinaca kale, soo laabashadiisa cajiibka ah.
Warka wanaagsan ee badbaadintaada
Bawlos Bawlos wuxuu gacan ka geystay kicinta dhaqdhaqaaqa weyn ee labaad ee injiilka - oo ku faafay Yahuudda yari illaa adduun weynaha Greco-Rooma ee qarnigii koowaad. Bawlos, oo ah Masiixiyiinta Masiixiyiinta ah ee Masiixiyiinta ah, wuxuu tooshka iftiinka iftiinka ee injiilka ku xirayaa nolol maalmeedka. Isagoo amaanaya Masiixa ammaanta leh, wuxuu sidoo kale ka walaacsan yahay cawaaqibka waxqabadka leh ee injiilka.
In kasta oo ay mucaaradku ka soo horjeedaan, Bawlos waxa uu siinayaa Masiixiyiinta kale micnaha naxdinta leh ee nolosha Ciise, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa:
Isaga qudhiisuna wuu idinla heshiiyey, idinkoo waagii hore shisheeyayaal ahaa, oo cadowtinimo dhexdiinna kaga joogsaday dhimashadii jidhkiisa dhimashadiisa, in uu wejiga idinka dhigo mid quduus ah oo eedla'aan iyo iin la'aan ah; haddii aad ku sii jirto iimaan, aasaas iyo adag "oo ha ka tegina rajadii injiilkii aad maqasheen oo lagu wacdiyo uunka oo dhan oo samada ka hooseeya. Aniga, aniga oo Bawlos ah waxaan noqday midiidinkiisa" (Kolosay 1,21-23).
Heshii. Hufan. Grace. Madaxfurashada. Dambi dhaaf. Mana aha oo kaliya mustaqbalka, laakiin halkan iyo hadda. Taasi waa injiilka Bawlos.
Sarakicidda, gogol ay u fadhiyaan aqoonyahannada iyo Johannes ayaa u horseeday akhristayaasheeda (Yooxanaa 20,31), wuxuu sii daayaa xoogga gudaha ee injiilka nolosha maalinlaha ah ee Masiixiyiinta. Sarakicidda Masiixu waxay xaqiijisaa injiilka. Sidaa darteed, sidaas darteed Bawlos wuxuu barayaa, dhacdooyinkaas ka dhacay Yahuudiya fog waxay rajo gelinayaan dadka oo dhan:
«... Kama xishoodo injiilka; maxaa yeelay, waa xoogga Ilaah oo barakeeyo kuwa isaga rumeeyey oo dhan, marka hore Yuhuudda iyo Gariigta sidoo kale. Maxaa yeelay waxay muujineysaa xaqnimada ka horreysa Eebbe, oo ka timaadda iimaanka xagga rumaysadka ... " (Rooma 1,16-17).
Rasuul Yooxanaa wuxuu ku darsaday aragti kale injiilka. Waxay tusinaysaa Ciise siduu “J ü heesta uu jecel yahay " .
"Ciise wuxuu sameeyey calaamooyin badan oo kale hortiisii ​​xertiisii ​​aan ku qorin kitaabkan. Laakiin kuwan waxaa loo qoray si aad u rumeysid inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad nolosha ku lahaatid magiciisa xagga rumaysadka. " (Yooxanaa 20,30: 31).
Soo bandhigista injiilka ee qaybta John ayaa asaas u ah odhaahda la yaabka leh: "... si aad nolosha ugu heshid iimaan."
Yooxanaa si mucjiso ah ayuu u gudbinayaa waji kale oo injiilka: ciise masiixi waqtiyo isku dhow oo shaqsiyan aad u wanaagsan. Yooxanaa wuxuu ka bixiyaa xisaabtanka nololeed ee shaqsi ahaaneed, joogitaanka Masiixa.
Injiilka Yooxanaa waxaan kula kulannay Masiixa oo ahaa wacdiye caan ah oo awood badan (Yooxanaa 7,37: 46). Waxaan aragnay Ciise oo diirran oo soo dhoweyn leh. Ka soo casuumadkiisii ​​casuumadda "Kaalay oo arag!" (Joh. 1,39) ilaa loolanka loogu jiro Thomas ee shakiga gelinaya inuu fartiisa farta ku geliyo dhaleeceynta gacmihiisa. (Joh 20,27), halkan waxaa lagu muujiyey qaab aan la ilaawi karin oo ahaa kii hilib noqday oo dhexdeenaba ku noolaa (Yooxanaa 1,14).
Dadku waxay dareemayeen soo dhaweyn iyo raaxo leh Ciise in ay isweydaarsi nool la yeeshaan isaga (Yooxanaa 6,5: 8). Way ag jiifsadeen isaga oo wax cunaya oo wax isla cunaya isla saxan (Yooxanaa 13,23: 26).
Aad bay u jeclaayeen isla markii ay arkeenna waxay xeebta u liqeen inay cunaan kalluunka uu isagu isku shiilay (Yooxanaa 21,7: 14).
Injiilka Yooxanaa wuxuu ina xusuusinayaa inta injiilku ku tiirsan yahay Ciise Masiix, tusaaladiisa, iyo nolosha weligeed ah ee aan ku helno isaga (Yooxanaa 10,10). Waxay ina xusuusineysaa in wacdinta injiilka aan ku filnayn. Waa inaan sidoo kale ku noolaano. Rasuul Yooxanaa wuxuu nagu dhiirrigeliyay: Tusaalaheenna wuxuu ka caawin karaa dadka kale inay la wadaagaan injiilka boqortooyada Ilaah annaga. Tani waa waxa ku dhacay haweeneyda reer Samaariya ah oo ceelka Ciise kula kulantay (Joh. 4,27-30), iyo Maria von Mandala (Yooxanaa 20,10: 18).
Kii ku ooyay qabrigii Laasaros, oo ahaa addoonkii is-hoosaysiinta ee F ü sse maydhay, nool maanta. Wuxuu ina siiyaa joogitaankiisa Ruuxa Quduuska ah:
Ku alla kii i jecel, ereygaygay xajin doonaa, aabbahayna waa jeclaan doonaa isaga, oo annaguna waannu u iman doonnaa oo waannu la degganaan doonnaa ... Qalbigaagu ma cabsanayo oo ü ha cabsan " (Yooxanaa 14,23:27).
Ciise si firfircoon ayuu dadkiisa maanta ugu hogaamiyaa Ruuxa Quduuska ah. Martiqaadkiisu waa mid shaqsiyeed oo dhiirigeliya sidii horeba: "Kaalay oo arag!" (Yooxanaa 1,39).
Buug-yaraha Kaniisadda Adduunka ee Ilaah